I-Historic Guest Apt e-Haverford - I-Airbnb
I-Historic Guest Apt e-Haverford
544 okushiwo abanye
Haverford, Pennsylvania, i-United States
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Douglas
I-Magnificent 2nd Floor guest apt, ingxenye yefa langempela le-Allgates. Eduze kwendlu yenqola eguquliwe, enenqola engumlando, kanye nendlu yesikole yama-1700s e-culdesac ebukekayo neseceleni. Eduze kwamakolishi endawo, imigwaqo emikhulu, i-Merion Golf, kanye nesitimela. Isanda kulungiswa ngo-2020.
Lesi sakhiwo esihle siyindlu yezivakashi esitebeleni samahhashi esiguquliwe, njengengxenye yesithabathaba somuzi wakwa-Allgates ngakuCoopertown Road eHaverford, ePennsylvania. Yakhiwa cishe ngo-1905, yamukelwa ku-National Historic Registry ngo-1979, futhi ekugcineni yaguqulwa yaba indawo yokuhlala ngo-1987 njengengxenye yohlelo lokusebenzisa kabusha oluguquguqukayo olwaqalwa ngesikhathi sokubuyiselwa nokuthuthukiswa kwendawo yokuqala eyi-26 acre Allgates. Indawo, iyingxenye yenhlangano yabanikazi bezindlu ezizimele ye-Allgates, eduze kwe-Allgates Drive. Vala ukusondela enhliziyweni yeBryn Mawr, Haverford, Merion Golf Course kanye nayo yonke imithambo emikhulu. Iyunithi ivuselelwe ngoJanuwari 2020 ngegumbi lokugezela elisha, ikhishi, i-flooring, umbhede weCasper, usofa, kanye nefenisha.
4.97 · 544 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-544
Le ndawo isendaweni ecebile engxenyeni ye-Allgates e-Haverford. Izakhiwo eziningi ezingomakhelwane zinkulu kanti ezinye izithabathaba zezigidi zamarandi.
Sizoba endlini enkulu ukusiza nganoma imiphi imibuzo noma izidingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Haverford namaphethelo